I-Castings Manufacurer, i-Grate Bar, i-Steel Rolling, i-Steel Mill - i-Xingtejia
Gqoka Izingxenye Kwezimoto Zama-Pallet
Izinsiza Zokugqoka ze-Grate
Isithando Somlilo Roller
SINIKEZA IMIKHIQIZO EPHAKATHI
Sihola umphakeli wesikhungo sokucisha ugesi Waste. Sisebenzise ngempumelelo izinhlobo ezingama-46 ze-grate, futhi inqubo ivuthwe kakhulu. Ikhwalithi esitebeleni nentengo yefektri ephansi yizizathu zokuthi kungani kufanele usikhethe.
I-XTJ iminyaka engaphezu kwengu-10 ibingumphakeli ohamba phambili emhlabeni wonke ku-OEM nakwimakethe yangemuva yekhwalithi ephezulu engamelana nokushisa futhi ifake ama-castings amelana nezimboni zezimayini nezokumbiwa phansi.
Siphakela ukunemba okuphezulu okuphezulu nekhwalithi ephezulu yokumelana nokushisa nokugqokwa okungavimbeleki kwezigayo eziningi zensimbi, njenge-roller roller, inhlangano yomhlahlandlela, iroll yomlilo, irowu yemisebe, njll.
Singumhlinzeki oholayo wesigayo sephepha. Ukulethwa okuzinzile nokugcina isikhathi kwenza ungabi nasidingo sokukhathazeka ngesikhathi sokuphumula.
Sinikezela ngohlaka lokwelashwa kokushisa nenduku eyinhloko yabakhiqizi abaningi bezokwelapha ukushisa. Sisebenzisa ukusakaza kwe-silica sol investment, umkhiqizo unekhwalithi enhle yokubukeka nempilo yesevisi.
Singabantu isisekelo se-OEM esinamandla ethu wokuchofoza. Izinqubo zethu zifaka ukusebenza okushisayo (Shell isikhunta ekubunjweni, Investment thusi, Resin isihlabathi isikhunta thusi, Silica sol utshalomali thusi, futhi ukushisa ukwelashwa), Cold ukusebenza (Lathe, isigayo, kuyisicefe, sokuprakthiza, Sandblasting futhi Wokushaya).
Besilokhu sigxile ekukhiqizeni okokubilisa izesekeli iminyaka engaphezu kwengu-10. Siqale kusuka ekucwaningeni okuzimele nasekuthuthukiseni inqubo yokukhiqiza yeGerman Martin Grate Bar futhi senza impumelelo enkulu!
IZINDABA zakamuva maqondana neXingtejia
Sifaka izikhungo ezimbili zemishini ye-CNC!
Njengoba ama-oda ethu ahlukahlukene enyuka unyaka nonyaka, umthamo wethu wokuqala wokukhanda wehlulekile ukuhlangabezana nezidingo zethu zamakhasimende. Ngakho-ke, sethule imishini emibili ye-CNC yokugaya amandla. Le mishini emibili yenzelwe imikhiqizo yethu ye-grate. Ziqhutshwa yi-gea ...
Uyemukelwa abaholi bakahulumeni kanye nochwepheshe ukwenza ukuhlolwa kokuphepha esitshalweni sethu!
NgoJuni 4, 2021, abaholi nochwepheshe be-Government Safety Supervision Bureau bavakashela ifektri yethu ukuyokwenza ukuhlolwa kokuphepha kumishini yokukhiqiza nasendaweni yokukhiqiza yefektri yethu. Ngenxa yezingozi zokuphepha ezisanda kusondela ezenzeka njalo. T ...
Ngobuningi obukhulayo bebhizinisi lethu lokuhweba langaphandle eminyakeni yamuva, imboni yethu yabhekana nokushoda komthamo omkhulu engxenyeni yesibili yonyaka odlule. Ukuphendula lesi simo, isisekelo sethu sengeze isithando somlilo esimaphakathi esisha kulo nyaka. Ukwakhiwa o ...
No.6 Jianghe Road, Jingjiang Idolobha, Isifundazwe Jiangsu, China